Mihodiha amin'ny consultancy - Mpanamboatra Million
Izahay ao amin'ny Million Makers no mifantoka voalohany amin'ny fampandehanana ny fandraharahana, ary koa, ny fandatsahan-drano sy ny fanamboarana ny mpampindram-bola noho ny fanarenana an-tery. Fantatsika rehetra fa ny varotra bebe kokoa, ny fifanarahana lehibe kokoa ary mpanjifa marobe no fitaovana tsara indrindra hamahana ny krizy ara-bola sy amin'ny famerenany ny orinasam-barotra amin'ny sehatry ny asa mahasalama. Mifantoka amin'ny fikajiana ny zon'ny tompona izahay ary manandrana ihany koa miketrika ny ekipa mpitari-doha, mpiasan'ny laharana voalohany ary mpiara-miasa amin'ny tsingerin'ny fihodinana.
Ireo orinasa miatrika fanamby be dia be, manakarama ny mombamomba anay avy any an-toerana mba hahazoana fanampiana ho azy ireo hiverina.
Izahay dia manampy ny orinasa amin'ny alàlan'ny fanomezana consulting amin'ny fototry ny tetik'asa fohy sy amin'ny tetikady stratejika lava. Iray amin'ireo tombontsoa lehibe indrindra amin'ny fahazoana ny ekipantsika matihanina ny mitondra zavatra tsy mivadika. Tanjona amin'ny alàlan'ny fanomezana fijerena sy soso-kevitra ary hampidirana ireo dingana mahasoa ny orinasa.
Raha nahatratra tohina madiodio vetivety ny orinasa noho ny toe-javatra mampidi-doza, toy ny fihenan'ny toekarena midadasika na ny fihenan'ny indostrian'ny orinasa, dia mety hialana amin'ny fanakaramana ny manam-pahaizana manokana momba ny fiovana. Ity dia tsy dia mikorontana sy manelingelina toy izay mitondra manam-pahaizana manokana momba ny fihodinana. Na izany aza, raha lalina ny olana, toa ny banky na ny fivarotana tsy nahomby na ny tompom-pitondrana, dia matetika no hany fomba hamonjy ny orinasa.
Matetika isika no manapa-kevitra ireo teboka voalaza etsy am-piandohana taorian'ny famakafakana lalina ny toe-javatra:
Ny halavan'ny firesahana
Ny fifaneraserana ifanakalozana matetika dia mihazakazaka herinandro na volana na taona miankina amin'ny toe-javatra sy ny krizy saingy efa manomboka ny fiandohan'ny fotoana sy ny fijanonana ka mifehy ny fidirana sy ny vidiny.
Ny rafitry ny saram-bola dia tapaka hatrany hatrany am-piandohana mba hahazoana antoka fa samy mahazo aina ny andaniny sy ny ankilany, mety ho miorina amin'ny fampisehoana izy io, fisaka ho an'ny fiaraha-miasa na vidin'ny sarany adiny iray, miankina amin'ny fahazoana ny andaniny sy ny ankilany.
Ny tanjona mazava sy azo refesina dia napetraka alohan'ny hanombohan'ny ekipa manampahaizana manokana ka ny olon-drehetra dia ao amin'ny pejy mitovitovy amin'izay maharesy lahatra.
Ny ekipanay manam-pahaizana momba ny fihodinana, dia manao fanombatombana eo amin'ny sehatry ny fahombiazan'ny orinasa mba hamaritana ny vinavinan'ny fifohazana sy ny tombony ho avy. Raha toa ka mety misy ny fifohazana, dia ny fandraisana andraikitra ihany no aorianay, aorian'ny fandinihana ny antsipirihany momba ny fitantanam-bola ao amin'ny orinasa sy ny fanadihadihana sy ny fanadinadin-kevitra lalindalina miaraka amin'ireo olona manan-danja izay nitarika fampisehoana, izay ahitana, mpanatanteraka, mpitantana ary mpikambana ao amin'ny birao, sns.
Aorian'io, mirona ny hanomana drafitra hetsika isika izay mandahatra ny tolo-kevitray sy ny tena zava-dehibe amin'ny fanatrarana ireo mari-pamantarana, dia ho toy ny sarintany ihany koa ho an'ny fivoarana tsara sy mahasoa.